May 2021 - Iphepha 24 of 24 - Funda ukurhweba
Isikhokelo sokungenisa kwiiMpawu ezingabonakaliyo (NFTs)
Ukuhlaziywa: 2 May 2021
Umzi mveliso we-cryptocurrency kunye ne-blockchain uyaqhubeka nokuvela njengabangeneleli abatsha abasekwe kwi-crypto, kubandakanya iithokheni ezisetyenziswayo, amathokheni okhuseleko, kunye neethokheni zabucala, ezihambisa ishishini kumanqanaba aphezulu okuzibandakanya kunye nokwamkelwa. Oko kwathethi, iiTokeni ezingafakwanga (i-NFTs) zifumene ingqalelo enkulu kwezi nyanga zidlulileyo. Kwesi sikhokelo sifutshane, siza kujonga ukuba zeziphi ii-NFTs kunye nokuba zisebenza kanjani kanye.
Iithokheni ezingabonakaliyo (NFTs) ngomnye umzekelo wotshintsho olukhawulezileyo kushishino. Kwesi sikhokelo, sivavanya ukuba ziintoni iiNFTs, zisebenza njani, kwaye zisetyenziswa njani.
Zithini iiMpawu ezingafakwanga?
Ii-NFT zii-asethi zedijithali eziqukethe ulwazi lomntu olubhalwe kwizivumelwano ezifanelekileyo. Olu hlobo lusekwe kubuntu lubanika ezi tokeni umohluko wazo, njengoko zingenakubekwa endaweni kwaye azinakutshintshwa. Ukubeka nje, akunakubakho zimbini ii-NFTs ezifanayo.
Ngokungafaniyo neefat kunye nokudluliswa kweeasethi zedijithali, ii-asethi ezingafakwanga ukungabonakali ziyahlulwa, kufana nokuba amatikiti ekhonsathi awakwazi ukwabiwa.
Enye yeeNFTs zokuqala yayizii-CryptoKitties eziqokelelweyo. Yonke ikati yedijithali esekwe kwi-blockchain yahlukile; ukuba uthumela umntu i-CryptoKitty kwaye ufumane i-CryptoKitty komnye umntu, oyifumanayo iya kuba ngu-CryptoKitty owahluke mpela kuleyo uyithumileyo. Ukuqokelela iikati ezizodwa zedijithali yinjongo yomdlalo.
Ulwazi olwahlukileyo kwithokheni engafakwanga ibethelelwe kwisivumelwano sayo kwaye irekhodwa ngokusisigxina kwithokheni ye-blockchain. I-CryptoKitty isungulwe njenge-ERC-721 tokens kwi-Ethereum blockchain kodwa bafudukele kwi-blockchain yabo, ukuhamba, ukubonelela ngokufikelela okulula kubathengi abatsha.
Zisetyenziswa njani iithokheni ezingabonakaliyo?
Ii-NFT zisetyenziswa njengee-asethi zedijithali ezifuna ukwahlulwa kwezinye iithokheni ukungqina ukunqaba kwazo okanye ixabiso lazo. Banokumela nantoni na nayo yonke into ukusuka kubugcisa ukuya kwizicatshulwa ukuya kwiilayisensi zobunini.
Iithokheni ezingabonakaliyo ziyathengiswa ngokutshintshiselana nge-cryptocurrency kodwa ziyathengwa okanye zithengiswe kwiimarike zeNFT ezinjengeRarible, OpenSea, kunye ne-Enjin Marketplace.
Isebenza njani i-NFTs?
Iithokheni eziqhelekileyo ezinje ngeBitcoin kunye ne-Ethereum esekwe kwi-ERC-20 iithokheni zinokuchaphazeleka, oko kuthetha ukuba banokutshintshiselana, ngokupheleleyo okanye ngokuyinxalenye, kwenye enexabiso elilinganayo. Nangona kunjalo, imigangatho yeethokheni engafiyo ye-Ethereum yi-ERC-721.
Ii-NFT zinokwenziwa nakwezinye ii-blockchains ezinesivumelwano esine-smart non-fungible support. Iibhloko ze-blockchains ezinjenge-NEO, i-EOS, kunye neTron zonke zibonelela ngeqonga elifanelekileyo leNFT.
Iithokheni ezingabonakaliyo kunye nezivumelwano zazo ezinobuchule zenza indawo eneempawu ezinenkcukacha, njengobunini bomnini, imethadatha etyebileyo, kunye nokunxibelelana kweefayile ezikhuselekileyo, ukongezwa kwiiasethi zedijithali. Oko kwathethi, ukubanakho kweeNFTs ukubonelela ngobunini obungaguqukiyo kwiasethi linyathelo elikhulu kwilizwe ledigital elikhulayo. Ezi thokeni zinokubona isithembiso se-blockchain sokhuseleko olungathembekanga olusetyenziswa kubunini okanye kutshintshiselwano ngayo nayiphi na iasethi.
tags Cryptocurrency, SI KHOKELO, I-NFTS
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH): U-Ether ubuyela umva kwi- $ 2,950.50 ePhakamileyo, ucebisa ukuba ukuKhangela okukude kufutshane
U-Ethereum uhlanganisene ne-3,000 yeendawo ezichasayo, ejongene nokwaliwa kwi-2,950.50 yeedola
Eyona altcoin inkulu ibuyela umva kwicala eliphantsi
Ixabiso langoku: $ 2,916.43
Intengo yeNtengiso: $ 337,471,356,737
Umthamo wokuThengisa: $ 337,471,356,737
Uhlalutyo lwamaxabiso e-Ethereum (ETH) ngoMeyi 2, 2021
The ezinkulu altcoin iye yaphuka ngaphezulu kwe-2,800 yeedola ukuxhathisa njengoko imarike yahlanganisana ukuya kwi-3,000 ephezulu. U-Ether ujongene nobunzima ekungeneni kwinqanaba lokumelana ne- $ 3,000. Okwangoku, ixabiso le-ETH libuyela kwindawo ephezulu. Esinye isizathu esinokwenzeka kukuba i-RSI kunye ne-stochastic yemihla ngemihla ibonakalisile ukuba ixabiso le-Ether lifikelele kummandla othengiweyo wentengiso. Abathengisi kunokwenzeka bavele ukutyhala amaxabiso ezantsi.
Ixabiso le-altcoin lenyukele kwinqanaba le-74 ye-Relative Strength Index yexesha le-14. Imarike kuthiwa ikummandla othengwe kakhulu. Intsingiselo yeyokuba amaxabiso kaEther anokufumana amaxabiso ashukumayo asezantsi. Ingqekembe nayo ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. I-stochastic yemihla ngemihla ifikelele kwimeko engaphezulu kwe-Epreli 26.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-Ethereum ibuyela emva emva kokwaliwa kwindawo ephezulu yamva nje. Akucaci ubungakanani bentshukumo eya ezantsi. Ukunyuka kuya kuqhubeka kwakamsinya nje amaxabiso afumana inkxaso. I-Ethereum inyuka emva kokubuyela kwi-2,900 yeedola yenkxaso. Ngeli xesha, ngo-Epreli 22 uptrend; umzimba wekhandlela ovavanywe ngokutsha uvavanye inqanaba lokubuyiselwa kwe-Fibonacci engama-38.2%. Oku kubuyiselwa endaweni kubonisa ukuba i-Ethereum iya kunyuka iye kwinqanaba le-2.618 yokwandiswa kweFibonacci okanye ephezulu ye-3,765.91 yeedola.
← Entsha izithuba 1 ... 23 24abaDala izithuba →